Verify IQ Option ထရေးဒင်းအကောင့် | binary Options ကိုထရေးဒင်း - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
သင့်ရဲ့အတည်ပြုရန်လုပ်နည်း IQ Option ကုန်သွယ်အကောင့်
မတ်လ 14, 2018
binary options များကဘာတွေလဲ?
binary options များဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါသလား
binary options များအန္တရာယ်ကင်းပါသလား?
တစ်ဦးက binary option ကိုဝယ်အားလုံးမှာ fixed ပြန်လာသို့မဟုတ်ဘာမျှမခံနိုငျတဲ့ဘဏ္ဍာရေးစာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်စာချုပ်ဤကဲ့သို့သောတတ်၏။ ငါအမေရိကန်ဒေါ်လာ / EUR ၏စျေးနှုန်း 10 မိနစ်အကြာတွင်ထိုသို့ထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်လိမ့်မည်ဟု $ 30 ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များဆိုရမယ့်အခြို့သောငွေပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ အဆိုပါရွေးချယ်မှုများထုတ်ပေးသူထံကိုငါ့ခန့်မှန်းမှန်ကန်လျှင်ငါ့ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏ၏ 85% ပေးချေရန်သဘောတူခဲ့ကြသည်။ မရရှိလျှင်, ငါသည်ငါ့ $ 10 ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ အိုင်ဒီခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်အဖြစ် 30 မိနစ်ပြီးနောက်စျေးနှုန်းမြင့်မားသည်။ ဒီတော့ရွေးချယ်စရာထုတ်ပြန်သူငါ့ကို $ 18.5 ချေ။
ပထမဦးဆုံးအ binary options များ 2008 အတွက်ဘဏ်များကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကိုရင့်ကျက်အဖြစ်အွန်လိုင်း Forex ပွဲစားများအများပြည်သူ binary options များရာပူဇော်သက္ကာကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ဤကုန်သည်များအနေဖြင့်ငွေရှာဖို့ထွက်ခဲ့ကြတယ်ရာများစွာကိုလိမ်လည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ကမ္ဘာအနှံ့အများအပြားစည်းမျဉ်းအလောင်းတွေ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ဥပမာ, ယူအက်စ်အေအတွက် CFTC binary options များကုန်သွယ်တားမြစ်မထားဘူး။ သို့သော်ထို binary options များရာပူဇော်သက္ကာကိုမဆိုလဲလှယ်အပြည့်အဝ CFTC နှင့်သို့မဟုတ် SEC နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။
ဥရောပမှာတော့ထိုကဲ့သို့သော CySEC နှင့် FCA အဖြစ်အားပြိုင်မှုကိုလည်းအပြည့်အဝစညျးမဉျြးစညျးကမျးဖြစ်ဥရောပဖောက်သည် binary options များရာပူဇော်သက္ကာကိုပွဲစားလိုအပ်သည်။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင် binary options များကုန်သွယ်ကမ္ဘာအနှံ့နိုင်ငံအများအပြားအတွက်ဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ညာဘက်သိတစ်ခုတည်းသောတိုင်းပြည်ယခုကြောင်း binary options များကုန်သွယ်ဣသရလေဖြစ်ပါတယ်တားမြစ်ထား။
သငျသညျထို binary options များရောင်းဝယ်ဖောက်ချင်တယ်ဆိုရင်, သင့်ကိုအဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုသင်နှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံအကျိုးဆောင်သို့မဟုတ်လဲလှယ်အပြည့်အဝစညျးမဉျြးစညျးကမျးရှိမရှိဖြစ်သင့်သည်။ ယူ IQ Option ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်။ ဤသည်ပွဲစားအပြည့်အဝဥရောပနိုင်ငံသားများမှဘဏ္ဍာရေးတူရိယာကုန်သွယ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းရန် CySEC နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပြည့်အဝအာမခံသည်နှင့် incase အကျိုးဆောင်ပျက်ကွက်, သင်လျော်ကြေးငွေပါလိမ့်မည်ဆိုလိုသည်။
သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပြည့်အဝကာကွယ်ထားသည်ပေမယ့်, ဤသူသည်သင်တို့အောင်မြင်သောကုန်သွယ် binary options များဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်အမြဲရှိပါတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသင်သုံးပြီးလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်အမြတ်အစွန်းများသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ် IQ Option သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုကောင်းသောကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာချမှတ်ခြင်းနှင့်ကောင်းသောသုံးပြီး IQ Option ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်။
တိုင်းအသစ်က IQ Option ကုန်သွယ်အကောင့်ကိုမစိစစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားလိုအပ်ချက်များတစ်ခုဖြစ်သည် CySEC, IQ Optionအဓိကထိန်းညှိ့။ အများဆုံးကုန်သည်များအကောင့်စိစစ်အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နာကျင်ကျိန်းစပ်နှင့်အချိန်-စားသုံးရှာတွေ့သော်လည်းသူတို့၏အားသာချက်ဖို့ပါပဲ။ ဒါ့အပြင်သူကတစ်ဦးတည်းအချိန်ဖြစ်စဉ်ကိုပါပဲ။ အကောင့်စိစစ်အတည်ပြုလိုအပ်သောသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်:
CySEC သာသူတို့ကအောက်မှာသွားအမှုအတွက်ပွဲစားနှင့်အတူရံပုံငွေအပ်နှံခဲ့ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သူကုန်သည်များကအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုအကောင့်သင်လိုအပ်သမျှဖြစ်ပါတယ်။
အကောင့်စိစစ်အတည်ပြုခွင့်ပြု IQ Option ငွေကြေးခဝါချမှုကိုတားဆီးသောအအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေများကိုလိုက်နာရန်။
သင်တစ်ဦးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ် အကယ်. IQ Option ကုန်သည်အကောင့်များနှင့်ဒီမှာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခံရဖို့သေးများမှာယူနိုင်ရန်ခြေလှမ်းများဖြစ်ကြသည်။
သင့်ရဲ့ရန် Login IQ Option အကောင့် သင်သည်သင်၏ account တစ်ခု register ဖို့အသုံးပြုအသေးစိတ်ကို အသုံးပြု. အောက်ပါဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
[wpaff_table အိုင်ဒီ = "9"]
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတျ tab ကိုပေါ်က်ဘ်ဆိုက်ကလစ်ပါ။ ဤသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်းကိုရန်သင့်အားညွှန်ကြားနေသည်။ စာမျက်နှာ၏အောက်သို့ဆွဲချခြင်းနှင့်အကောင့်ကိုစိစစ်အတည်ပြု link ကို click လုပ်ပါ။
အဆိုပါကုန်သွယ်များအတွက် app ကို Setting ကိုသွားပါ -> လုံခြုံရေး
ဤအချက်မှာ, သငျသညျအရာနှစ်ခု, သင့်အီးမေးလိပ်စာနှင့်သင့်ဖုန်းနံပါတ်အတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်လိမ့်မည်။ အတည်ပြုရန်အီးမေးလ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင့်အီးမေးလ်သွားပြီးကစေလွှတ်အီးမေးလ်ဖွင့်လှစ် IQ Option။ သင်အတွက်ကော်ပီကူးခြင်းနှင့် paste ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အထူးကုဒ်ရှိပါတယ် IQ Option အီးမေးလ်အကောင့်စိစစ်အတည်ပြုစာမျက်နှာ။ paste လုပ်ထားတဲ့တပြိုင်နက်, ဆက်လက် button ကို click လုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းနံပါတ်အတည်ပြုရန်, သင်ပေးထားသောလယ်ပြင်ပေါ်မှာရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပို့ကုဒ်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ IQ Option သင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုအတည်ပြုရန် site ပေါ်တွင်ရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ကုဒ်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ရန် IQ Option သင့်အီးမေးလ်နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုသင် codes တွေကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တင်ပြရန်ချက်ချင်းစစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့ကြကြောင်းအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့အမည်များ, မွေးလိပ်စာနှင့်နေ့စွဲအဖြစ်အသေးစိတ်ကိုဝင်ရောက်ပါဝငျသညျ။ IQ Option သငျသညျပြီးသားကမပို့နိုင်လျှင်သင့်ရဲ့ ID သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူလိုအပ်သည်။ သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်ထဲမှာရိုက်ထည့်အဆိုပါဒေတာကိုသင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းအတွက်ကိုက်ညီသင့်ပါတယ်။
Tags: အကောင်းဆုံး iq option ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ, အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ iq option, ထို binary ကုန်သွယ် iq option ဗျူဟာ, သရုပ်ပြကုန်သွယ် iq option, iq option ထို binary options များကုန်သွယ်, iq option ထို binary ကုန်သွယ်, iq option ဒွိကုန်သွယ်လှည့်ကွက်, iq option Forex ကုန်သွယ်, Iq Option ထရေးဒင်း, iq option ကုန်သွယ်အကောင့်, iq option ကုန်သွယ်ပြန်လည်သုံးသပ်, iq option ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ, iq option ကုန်သွယ်အကြံပေးချက်များ, ကုန်သွယ် iq option, ဘာဖြစ်သလဲ iq option ကုန်သွယ်